Ọgọst. Nhọrọ nke akụkọ nchịkọta akụkọ | Akwụkwọ ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Egwuregwu, Akwụkwọ, Black akwụkwọ
August Ọ bụ ọnwa ezumike kacha mma na, n'agbanyeghị na ọ bụ oge anwụ na -adịghị ahụkebe, ihe na -adịghị ahụkebe ma ọlị bụ ịnọgide na -agụ ihe. Nke a bụ otu nhọrọ nke 6 novelties nchịkọta akụkọ nke gụnyere aha dị ka lo new de Fernando Aramburu o Pilar Navarro na ụfọdụ n'ime ọchị Kacha kpochapụwo na nke ugbu a, n'etiti ndị ọzọ. Anyị na -ele anya.
2 Dị ka ịsụ ude - Ferzan Ozpetek
3 Site na ebe ọ bụla - Julia Navarro
4 Achọla m - Sara Medina
5 Maus - Ememe ncheta afọ 40 nke nwere oke - Art Spiegelman
6 Ụtọ ụtọ: Nlaghachi - Jeff Lemire
Mgbe ihe ịtụnanya na ihe ịga nke ọma mba ụwa dị Patria, Aramburu na -ewetara akwụkwọ akụkọ ọhụrụ a. Onye protagonist Toni, onye nkuzi ụlọ akwụkwọ sekọndrị na -ewe ụwa iwe, onye kpebiri igbu onwe ya naanị otu afọ gara aga. Mana ruo mgbe ahụ kwa abalị, n'ụlọ ya na nkịta ya na ọbá akwụkwọ nke ọ na -awụfu, ọ ga -ede akwụkwọ akụkọ ihe mere eme siri ike ma na -ekweghị ekwe, mana ọ bụghị n'adịghị nro na ọchị. N'ime akwụkwọ akụkọ a, ọ ga -enyocha ihe kpatara mkpebi ya, nzuzo ya na ihe gara aga, ezinụlọ ya na mmekọrịta ya, yana akụkọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na -agbagha. Ọtụtụ ihe mere ị ga -eji pụọ, mana ikekwe ịga n'ihu.
Dị ka ume - Ferzan Ozpetek
Ferzan Ozpetek bụ onye ntụzi ihe nkiri Turkish nke mba Italy na onye na -enyocha ihuenyo na -edekwa. N'ime akwụkwọ akụkọ a ọ na -ewebata anyị Giovanna na Sergio, na na Sọnde ọ bụla, ha na-akpọ ndị enyi ha ka ha rie nri ma nwee ọmarịcha nri abalị. Mana otu n'ime Sọnde ndị ahụ na -egosi nwanyị nke na -ekwu na ọ bi n'ụlọ ahụ n'oge gara aga ma chọọ ileta ya otu oge ọzọ. Akụkọ onye ọ bụla ga -amasị ya, nke ndụ nke ga -akpọga ha n'okporo ụzọ na -atụ aro Istanbul na ihe nzuzo nke mgbidi ụlọ nke ha na -edebe, ihe nzuzo nwere ike ịgbanwe ndụ Giovanna na Sergio na ndị enyi ha.
Site na enweghị ebe - Julia Navarro
Ọhụrụ nke Julia Navarro na -ekwe nkwa ihe ịga nke ọma ọhụrụ, nke ọzọ n'ime ọtụtụ ndị onye edemede nwere. Onye protagonist bụ Abir nasr, onye na -eto eto nke na -agba akaebe ogbugbu nke ezinụlọ ya n'oge ọrụ ndị agha Israel na ndịda Lebanon. Yabụ, ị ga -a thatụ iyi ahụ ga -achụ nta ndị ikpe mara ke ofụri eyouwem esie.
N'otu oge ahụ iyi egwu ahụ na -akpagbukwa Jacob Baudin, otu n'ime ndị agha ndị abuana ke edinam mgbe ị na -arụ ọrụ agha mmanye. Nwa nke nne na nna French, ọ ka na -adị ya ka onye mbịarambịa n'Izrel ma na -agba mbọ ka ya na onye Juu ya dị ná mma.
Abir nabatara ndị ikwu na Paris, ebe ọ na -adị ya ka ọnyà dị n'etiti ntọala ezinụlọ na -eku ume na ọha na -emeghe nke na -enye ya nnwere onwe yana ndị na -eto eto abụọ gụnyere: su adịchaghị Ogwe, onye na -enupụ isi megide mmachibido iwu okpukpe nke nna ya, na Marion, otu afọ iri na ụma nke ọ na -ada n'ịhụnanya nke ukwuu.
Mana ndụ Abir na Jekọb ga -agafe ọzọ ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị na Brussels.
Achọla m - Sara Medina
Sara Medina na -enye a thriller nke gụnyere ụmụ nwanyị abụọ: Silvia, onye isi na -ebi na mpaghara okomoko nke Barcelona na onye chọpụtara nke ahụ nwa ya nwoke Martí apụọla. Naanị ihe o nwere bụ ozi na -asị, "Achọla m."
Mgbe ọ gbalịsịrị ịkọsara ndị uwe ojii nwupụ ya, Sílvia kpebiri ime nyocha n'onwe ya wee jikwaa kpọtụrụ Moni, na enyi nwanyị Martí, nwa agbọghọ onye okporo ụzọ na cocaine iji mezuo nrọ ya: ịkwaga Tonga, paradaịs agwaetiti dị na Oké Osimiri Ndịda. Ọ chọpụtakwara na o nwere ihe kpatara ịchọta Martí, n'ihi na o zurula ngwugwu ikpeazụ o debere n'ụlọ.
Ụmụ nwanyị abụọ ahụ, ndị na -atụkwasịghị ibe ha obi, ga -eji ime ihe ike na ime ihe ike banye na Barcelona dị ize ndụ. iyi egwu agu, capo nke mafia nke mba ọzọ, dị ka mma agha Damocles n'isi ha.
oke - Ememe ncheta afọ 40 nke amachiri - Art Spiegelman
N'ime ụwa ndị na -atọ ọchị ma ọ bụ, ọkachasị nke akwụkwọ akụkọ eserese, ndị nkatọ na -ewere Maus dị ka otu nke kachasị mma nke akụkọ ntolite. Tụkwasị na nke ahụ, ọ ga -enwerịrị otuto ya otu n'ime onyinye onyinye a ma ama Pulitzer. Na -emezu 40 afọ.
Ugbu a mbipụta zuru oke ya na usoro izizi nke mpịakọta abụọ. Ọ gụnyekwara a akwụkwọ ntapụtabeghị nke ibe iri na isii nke onye edemede n'onwe ya chepụtara.
Cheta nke ahụ oke bụ akụkọ nke a Vladek Spiegelman onye lanarịrị Auschwitz kọọrọ nwa ya nwoke Art. Ọ dị mkpa ịkọwa ihe bụ n'ezie akụkụ kacha pụta ìhè na ọrụ a: ihe odide nwere ọdịdị ihu nke anụmanụ, nke a na -eji maka ịkọ akụkọ. N'ihi ya, ndị Juu bụ oke na ndị Nazi bụ nwamba.
Ụtọ Ụtọ: Nlọghachi - Jeff Lemire
Site na kpochapụwo, anyị na -ejedebe na otu aha ugbu a nke nwere mmetụta na ama ama, Sweet Tooth, nke onye edemede ama ama. Jeff lemire na colorist Jose Villarrubia. Akụkọ na -agbawa obi Gus, nwa ngwakọ n'etiti mmadu na mgbada, na -aga n'ihu na mbara ụwa nke nje na -egbu egbu bibiri kemgbe. ya mmegharị telivishọn nwere ike ịhụ na Netflix.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Ọgọst. Nhọrọ nke akụkọ akụkọ